Khuphela iSpotify Premium APK Mahala-VidaBytes | LifeBytes
Kulungiselelwe abo bafuna ukufikelela kuzo zonke uluhlu lweengoma zeSpotify kodwa simahla, Siza kuthetha ngeendlela zokukhuphela i-APK ye-Spotify yePremiyamu simahla. Awuyi kuba neengxaki ezinkulu okanye ukungafani, kuba uya kuba nayo yonke imisebenzi eyenziwa yi-Spotify Premium.
Esinye sezisombululo zokuqala esibonelelweyo kukukhuphela i-Spotify Beta, le yi-APK ebonelela ngokhuseleko nangona ikhululekile ngokupheleleyo. Awuzukucima naliphi na inani lokuveliswa kwakhona kweengoma, ngaphandle kokuba ufuna ukuzikhuphela kuba ingenalo msebenzi wasimahla.
Ngokukhuphela i-Spotify Apk uya kuba nakho ukufikelela kwizintlu zeengoma ezidlalwayo kunye ekwabelwana ngazo, kunye nezona ngoma zangoku, kwaye usebenzise unomathotholo ngaphandle kokuhlawula iindleko zesicelo. Nantsi indlela onokuyenza ngayo:
1 Uyifumana njani iNkulumbuso yeSpotify yasimahla?
2 Khuphela i-Spotify yeNkulumbuso yasimahla ngotshintsho lwe-ID yeselfowuni
3 Khuphela iNkokhelo yeSpotify yasimahla usebenzisa ukuKhangela okuSimahla
Uyifumana njani iNkulumbuso yeSpotify yasimahla?
I-Spotify Beta yinguqulelo yasimahla efana kakhulu neSpotify yePremiyamu, kwaye ukuyikhuphela kufuneka ufake ezi zixhumanisi ukuze ngokunqakraza kuyo ngokukhawuleza ufake iSpotify:
Le APK Spotify ikuvumela ukuba ube nelayibrari yakho, apho unokucwangcisa iingoma kunye nomxholo, kuxhomekeke ekubeni zeziphi ozithandayo, kwaye unokwenza uluhlu lwakho lokudlala.
Ikwayile nguqulo yeSpotify Premium yasimahla ehlaziywe ngokupheleleyo ukuze ibe ngathi uyikhuphele iSpotify yePrimiyamu ka-2019. isicelo.
Khuphela i-Spotify yeNkulumbuso yasimahla ngotshintsho lwe-ID yeselfowuni
Kwimeko yokhetho oludlulileyo ayisiyonjongo yakho okanye awukwazi ukuyikhuphela, unokukhetha ukutshintsha i-ID yeselfowuni ukuze ukhuphele iSpotify yePremiyamu simahla. Okokuqala, kufuneka ukhuphele usetyenziso lweSpotify ukwenza iakhawunti ngokungathi uza kusebenzisa inkonzo ehlawulelweyo, emva koko iya kukunika, ngokubhalisa iakhawunti, ukonwabela ixesha elincinci lokusetyenziswa simahla, okanye njengoko bonisa, ixesha lokuvavanywa kwesicelo.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ukusukela ngalo mzuzu isicelo sigcina i-ID yakho yeselfowuni kwimemori yayo, ke uyila iakhawunti entsha kwaye nge-ID efanayo awuyi kuba nakho ukukhetha ukulingwa simahla kweSpotify Premium. Kungenxa yoko le nto kucetyiswa ukuba lonke ixesha inkonzo yakho yasimahla iphela, wenza utshintsho kwi-ID ye-smartphone.
Kule nto kufuneka ube ngumsebenzisi wengcambu yefowuni ye-Android kwaye emva koko ukhuphele usetyenziso olubizwa ngokuba sisiTshintsho se-ID yesixhobo, unokukufumana ngokulula kuGoogle Play. Emva kokukhuphela usetyenziso, kuya kufuneka ungene kwaye ucofe iqhosha elibonisa igama "Random" kwaye ngale ndlela isicelo sizakukhethela i-ID entsha.
Inkqubo elandelayo yokuyigqiba kukuqala kwakhona kwesiqhelo kweselfowuni yakho, vula i-Spotify Premium kwakhona kwaye ubhalise umsebenzisi omtsha, uyakuqonda ukuba isazisi sakho asisayi kukhunjulwa kwaye siza kuphinda sikunike isilingo sasimahla kwakhona. Le yinkqubo enzima ngakumbi kodwa isasebenza.
Khuphela iNkokhelo yeSpotify yasimahla usebenzisa ukuKhangela okuSimahla
Enye inketho kwitafile yokukhuphela iSpotify simahla sisixhobo sokuSebenzisa ukuSebenza okuSimahla. Oku kuvela kwisicelo sokuba ungahlawuli kwaye ikuvumela ukuba wenze i-alias enekhadi letyala phantse kwaye simahla.
Nje ukuba ufumane ii-alias zakho kunye nekhadi lakho elibonakalayo ngale app, uya kuba nakho ukufaka loo datha kwiSpotify yeNkulumbuso kwaye uya kuba neSpotify simahla ixesha elide. Akufanele ukhathazeke ngokwenza ulwaphulo-mthetho, kuba ukuSebenza kovavanyo lwasimahla kuxhaswa ziibhanki zamanye amazwe.
Icala elisezantsi kuphela kolu khetho kukuba ifumaneke okwexeshana kwi-iOS kuphela. Ukuba iyafuneka kubasebenzisi be-Android, kuya kufuneka wenze enye inkqubo "ngokufikelela kwangoko" kodwa ungene kwiwebhusayithi esemthethweni yokungahlawuli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Izicelo » Khuphela i-Spotify Premium APK simahla
Iindidi zentsholongwane zekhompyuter eziyingozi kwinkqubo
Yintoni i-IMEI kwaye uyijonga ngokulula njani?